Fanaraha-maso kalitao ho an'ny tontonana vita amin'ny fantsom-pifandraisana 3d mifono PVC
Fanaraha-maso kalitao ho an'ny valiha vita amin'ny volo vita amin'ny volo vita amin'ny fantsom-bozaka vita amin'ny volo vita amin'ny volo vita amin'ny volo vita amin'ny volo vita amin'ny habe: haben'ny savaivony: 5.3mm Hole: 60x200mm habe: 2000x2440mm valiny: mahafeno fepetra. ...
Fandefasana: makarakara vy milanja 20 metrika taonina vonona ny hampidirina sy hamatsy ho an'ny tetikasa eo an-toerana any Shina
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-06-28
Fandefasana amin'ny 28 Jona: Fitotoana vy 20 metrika taonina vita amin'ny vy milanja vonona ny hampakatra sy hamatsy Vokatra: Fitotoana vy Size: Hetezo mba hamolavola, miaraka amin'ny bara famatorana. habe variuos. Surface: Status milonika mafana mandroboka: amin'ny famoahana ho an'ny fandefasana kendrena: ho an'ny fampiasana lalantsara. ...
Eo amin'ny fanamarinana eo amin'ny tranokala aorian'ny nanaterana ny vy vy napetraka napetraka
Afak'omaly, ny vokatra vy makarakara vy dia efa nipetraka tamina kamio ary nanomboka jurney hihaona amin'ny tompony. Vokatra: metaly fitaratra vy: famonoana mafana: famaritana isan-karazany: volavola 780 taonina Tetikasa: ho an'ny fananganana indostrialy ...
Fitotoana vy famaohana an-tànana an'ny karazana bar barazy 30x3mm tsotra ao anaty sambo fitaterana 40GP mankany Algeria 2021/6/10
Fitotoana vy famaohana an-tànana misy karazana bara tsotra 30x3mm ao anaty sambo kaontenera 40GP mankany Algeria 2021/6/10 Mitohy nanomboka omaly, kaontenera faharoa misy 40GP napetraka amin'ny kaontenera androany ary manomboka mandefa azy hihaona amin'ny tompony. Vokatra: vy makarakara Type: vy tsotra ...
Famonoana vy vy makarakara vy vy makarakara amin'ny fitoeran-javatra ary alefa any Algeria 2021/6/9
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-06-09
Ny fametahana vy mandeha amin'ny vy vy makarakara vy ao anaty kaontenera sy ny fandefasana any Algeria 2021/6/9 Kaontenera voalohany an'ny kaontenera avy any Algeria ho an'ny vokatra vy makarakara vy dia mivoaka ao anaty kaontenera izao. Mariho tsara momba ny fandefasana ho an'ny mpanjifa ...
Ataovy lavitra an'i Peter Cottontail ny tokotaninao sy ny zaridainanao
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-05-21
Mampalahelo fa tsy manao fitokonana tsy hihinan-kanina ny bitro, ary ny zaridaina sy ny zaridaina ary ny zaridaina anay dia manome legioma mifangaro vaovao sy matsiro. Amin'ny ririnina, rehefa mihabe ny rantsana miboridana, noana ny bitro amin'izay omen'ny zaridainantsika azy. H ...
China PPI: Index des vidin'ny mpamokatra - Materail manta
Raha ny angona farany navoakan'ny National Bureau of Statistics, tamin'ny volana martsa 2021, ny vidin'ny pabrikan'ny mpamokatra indostrialy (PPI) dia nitombo 1,6% isam-bolana, izay ny sandam-bola avo indrindra hatramin'ny antontan'isa isam-bolana (2002 hatramin'izao); Tamin'ny volana martsa, ny PPI dia nitombo 4,4% isan-taona ...
avy amin'ny admin tamin'ny 21-03-31
Katalaogy makarakara FRP: karazana bobongolo, karazana voatsokotra, karazana ambony voakolokolo, grating frp miaraka amin'ny karazana takelaka fonosana sy lisitr'ireo lanjan-tsoratry ny kofehin'ny fiberglass frp fitotoana Fiberglass dia manana fahafaha-mitondra entana lehibe, ary ny heriny miondrika sy miondrika dia mihoatra ny 600Mpa. Ny fanoherana ny havizanana dia manodidina ny 50 heny noho ny s ...
Inona no tokony hataoko aorian'ny vaksinako feno amin'ny COVID-19?
Na dia maro amintsika aza no miandry am-pitaintainana ny andro ahafahantsika manomana fotoana hifanarahana amin'ny vaksinin'ny COVID-19, dia mety ho lasa tsy takatrao araka ny noeritreretinao ity andro ity. Ny governora Gavin Newsom (Gavin Newsom) dia nilaza fa manomboka ny 15 aprily dia afaka mangataka fotoana amin'ny COVID ny Kalifornia rehetra 16 taona no ho miakatra ...
avy amin'ny admin tamin'ny 21-03-03
Ny zoma 26 febroary 2021 no fetibe fanala ho an'ny sinoa rehetra. Fetibe mahafaly izany. Manintona indrindra ny alina. Amin'ity andro ity dia ahanton'ny olona ny fanilo ary apetrany eo ambaniny ny ankamantatra. Avy eo tonga ny lalao: maminaza ny ankamantatra! Izay maminavina ny ankamantatra ankamantatra dia ...
Hatramin'ny fiandohan'ity taona ity, ny akora manta toy ny hazo, spaonjy, fitaovana firakotra simika, metaly tsy ferrous, ary na ny baoritra aza dia nisondrotra, ary nitombo avo roa heny aza ny vidin'ny sokajy sasany. Ohatra, ny metaly tsy ferrous dia nisondrotra manodidina ny 50%, ary poly-ether foam malefaka, manan-danja ...
Grating vy, FRP Grating, Welded vy Fefy Factory
Hebei Weijia MetalMesh Co., Ltd dia fikarohana, fampandrosoana, famokarana, varotra ary serivisy ho an'ny orinasa teknolojia avo lenta. Izahay dia vy vy mpitaingina voalohany any Shina. Manana tombony mifaninana amin'ny karazana fefy isan-karazany izahay, toy ny, fefy fonja, fefy seranam-piaramanidina, fefy lalamby, fefy mitoka-monina; vy g ...
Fanamarinana kalitao ho an'ny PVC mifono 3d vita amin'ny vy ...
Fandefasana: 20 metatra taonina an'ny gal ...
Eo amin'ny fanamarinana eo amin'ny tranokala aorian'ny fikolokoloana vy ...
Miraikitra amin'ny vy vy kofehy vy 30x3mm pl ...
Electro hosoka vy vy makarakara vy ...